El Diablo Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Beka ecaleni ubuqili kwaye ukhulise ukuthanda kwakho nokuzithemba.
Intsingiselo yekhadi le-tarot «UMtyholi»
Ikhadi likaMtyholi leTarot libonisa ubume betaboo - icala lasendle elilahliweyo ngokwenkcubeko kunye icala elimnyama umntu ngamnye kuthi ithwala i-subconscious yethu. Esi sithunzi ngokwenene sisembindini wobomi bethu, esingenako ukusisusa nesingasokuze sikwazi ukubuthambisa. Ukusuka kwiinguqulelo zayo zokuqala, ezazimele i-vampire-demon, UMtyholi wavusa uloyiko lokuba umntu "unokuphulukana nomphefumlo wakhe." ezandleni zemikhosi yasendle kunye nothando.
Umfanekiso kaMtyholi yavela phakathi kwinkulungwane ye-XNUMX isinika ukutolikwa okuntsonkothileyo ngakumbi: "kothixokazi we-Azazeli," ogama lakhe lingu-esoteric Baphomet. Amachibi eVolcanic omnqweno omkhulu kunye nomnqweno onika amandla kwimizamo yakho yokoyisa uxinzelelo lweendima ezibonisa imeko kunye nenkululeko yomphefumlo oyinyani.
Ukukhupha ukuthintela. Vumela ukuba ubonise yonke into oyiyo.
LIleta kaSathana ikucebisa ukuba ubonise isibindi. Kungangabikho nto unokuyizama ngokuzama ubuqili okanye ubuchule kule meko. Qinisekisa i-ajenda yakho, ziveze ngokunyanisekileyo kwaye uvumele iichips ziwele apho zinokufikelela khona. Okona kubheja kwakho kunokuba kukuchaza iimvakalelo zakho zokwenyani, kubandakanya umsindo.
Yamkela ukuba unazo naziphi na iimvakalelo onazo. Nangona kunokuba kungafuneki ukuba usebenze ngendlela oziva ngayo kuzo zonke iimeko, ukwamkela amandla kunye nobunzulu bamava akho angaphakathi kukuvumela ukuba uhlale unyanisekile kuwe.